Yarantii keli ahaan
by Yeruushaah Stewart
Last updated: Jan. 04 2018 | 2 min akhri
Doorashada in ay tahay mid loola jeedaa waxaad masuul ka tahay oo aad farxad u gaar ah & si aad haysatid oggalaansho tuuga ayaa Santa Claus iyo Bunny Easter iyo in aad naftaada u hesho wixii aad rabto u joogo dhalashadiisa. Adiga kaliya ayaa og waxa dhab ahaan ka dhigaysa aad sax ku qanacsanaanta. Kelida Maanta ayaa waxaa caado ka ah in ay ku raaxeysan in falalka kadiska ah ee anaanimada sameeyo. Waxaa Isku day & aad u jecel doonaa!
Khoof keli ahaan #3
Fa la la la luscious! Qaado casharrada codka. Waxay horumarin doontaa cod hadalkaaga iyo ku siin cusboonaadey isku kalsooni mar kasta oo aad furi afkaaga.
Khoof keli ahaan #10
Ultra-heer sare ah guriga-waxbarasho. Dabaaldegga gaar ah la kuugga martida ka makhaayad jecel ee degmadaada si aad. Mise macalinka salsa ka istuudiyaha qoob ka maxalliga ah ee ku darto Yeel in aad kulan ee soo socota teknoolajiyada. Waxaad” leeyihiin xiiso weyn barashada khiyaamooyinka ay ganacsiga.
Khoof keli ahaan #28
Gold Rush. Naftaada iibso gabal la yaab leh j-e-w-e-l-r-y. Ma dharka, wax dhabta ah. Hel karats qaarkood siday u waafaqayaan shakhsiyadda dhalaalayay. U gaar ah oo ay qado ugu horeysay ka dibna tag adeeganaya bauble weyn. Waqtiga aad damac dhowr gogo 'oo gaaray' mid ka mid ah hor u qaado.’
Khoof keli ahaan #31
Bollywood Babe. Bilow qoob caloosha. Dhaqdhaqaaqa waageeni, music saaidka, iyo dharka sexy – maxaa dheeraad ah oo aad rabto in laga yaabo in layli? Waxaan helay tons oo ku saabsan fasallada iyo labiska dharka iyo sidoo kale rajo u leh is bilaabay at www.shira.net iyo www.bellydancingvideos.com.
Khoof keli ahaan #55
Ku raaxayso Waxyaabaha Hurdo ee Life. Kasta hal mar ku nasta korna loo qaado heerka aad u dhadhan. Splurge dhalada weyn oo khamri ah. Muunad rash ee qabow Gormeega ah. Ka dalbo saxan cheese ah maqaaxi ah u qaadnaa. Ku noolaadaan nolol luxe ka.
Khoof keli ahaan #74
Away ee Weekend. Skip dhamaadka waalli sano ama qorsheeyo isbuucaan ka tagayo wakhti kasta oo sannadka ah. Hel map a iyo sawiri laba-saac gacan-time drive oo ah laba-saac-time hawada gacan. Diyaarso bac iyo booqo ah ma-si-fog HBS, magaalada deriska ah oo xiiso leh, Meelaha la shopping, ama xeebta u qurux badan. Ku soo dhawaada sanad ka hor la todobaadkan ka tagayo.
Khoof keli ahaan #90
Noolaado in jeclaada. Waqti qaado maalin walba inuu sameeyo mid wax aad u jecel yihiin. Waxaa la soo laalaadeen karin la saaxiibo, akhrinta buugga weyn, ama cunto karinta duufaan. Waxa muhiimka ah waa in aad qalbigaagana dadka iyo waxyaabaha aad jeclaan furo.
Guji si aad u wadaagaan on Google+ (Furmayaa suuqa kala cusub)
Sida loo dhunkada in 5 Talaabooyinka Easy
6 Muhiim Waxyaabaha Ragga fikirto marka galmada
5 Talooyin la fulin karo si loo soo jiito Oo naagtii reer riyooyinkiinna aad
7 Facts Sex doonin afuufa Your Mind
7 Khuraafaadka ku saabsan galmada
6 Taariikhda Summer Fikradaha
Ammaanka xubnaha ka yahay Our Top Mudnaanta,en
Sida loo Taariikhda on Facebook
+ Shukaansiga ee United States
+ Shukaansiga ee United Kingdom
+ Shukaansiga ee Kanada
+ Shukaansiga ee Australia
+ Shukaansiga ee Ireland
+ Shukaansiga ee New Zealand
+ Shukaansiga ee Koonfur Afrika
© Copyright 2018 Taariikhda My Butros. La dhigtay by 8celerate Studio